Ciise: The Detergent, Worldwide Church of God Switzerland (WKG)
Nadiifinta dibedda ma beddeleyso qalbigeenna! Dadka waxaa laga yaabaa inay laba jeer ka fikiraan inay sinaystaan, laakiin waxaa ka argagaxay fekerka ah inuusan qubeyska qubeysan ka dib. Xatooyo waa arin yar, laakiin way ka xanaaqsan yihiin markii eey ku dhacdo. Waxay leeyihiin qawaaniin ku saabsan sida sankaaga loo afuufo, sida naftaada loo nadiifiyo, waxa xayawaannada looga fogaado, iyo cibaado soo celisa aqbalaadooda. Dhaqanku wuxuu barayaa in waxyaabo qaarkood ay yihiin shucuur ahaan karaar - karaahiyo ah - mana fududa in dadkaan loo sheego in aysan dhib lahayn.
Nadaafadda Ciise waa la is qaadsiiyay
Baybalku waxbadan buu ka dhahayaa nadaafadda dhaqan ahaan. Cibaado dibadeedku waxay dadka ka dhigi karaan inay nadiifiyaan banaanka, sida aan ka akhrino Cibraaniyada 9,13, laakiin Ciise oo keliya ayaa inaga nadiifin kara gudaha. Bal ka fikir qol mugdi ah oo matalaya muuqaalka. Meel ku shub, qolka oo dhammana waxaa ka buuxsami doona iftiin - "Bogsiiyey" gudcurkiisa. Sidoo kale, Ilaahay wuxuu ku yimaadaa jidhka bini-aadamka qaab ciise si uu inaga nadiifiyo gudaha. Naafada ritual guud ahaan waxaa loo arkaa faafa - hadaad taabato qof aan nadiif ahayn, sidoo kale waxaad noqonaysaa qof aan nadiif ahayn. Laakiin Ciise waxay u shaqeysay jihada ka soo horjeedda: Daahirsanaantiisa ayaa ahayd mid la is qaadsiiyay, sida iftiinka uu dib ugu riixay mugdiga. Ciise wuu taabtay kii baraska qabay oo meeshii bukay ayuu bogsiiyey oo nadiifiyey. Isaguba wuu isla yeelaa - wuxuu inaga saaraa wasakhda iyo wasakhda nololeedkeena. Markuu Ciise ina taabtay, weligeen waxaan nahay kuwo akhlaaq ahaan iyo dhaqan ahaan daahir ah. Baabtiisku waa caado muujineysa xaqiiqadan - waa dhaqan caado ah oo dhaca hal mar nolosha oo dhan.
Ku cusub Masiix
Dhaqan diiradda saaraya cilado dhaqan, dadku rajo la'aan ayey awoodi waayaan inay xalliyaan dhibaatooyinkooda. Taasi miyaanay sidoo kale khuseyn dhaqan diiradda saaraya sameynta nolosha qiimo u yeelashadda jariimooyinka iyo dadaal nafsaani ah? Kaliya nimcooyinka oo dhan ayaa lagu badbaadin karaa nimcooyinka Eebbe oo ah Wiilkiisa u soo diray wiilkiisa si uu uga hortago wasakhda ku tiimbashada dawooyinka dabiiciga ah iyo inuu noo keeno fulinta run run ah xagga jacaylkiisa jacaylkiisa. Waxaan dadka u horseedi karnaa Bixiye kan nadiifiya oo jecel. Isagu wuu ka adkaaday dhimashada naftiisa, waana habka keena khasaaraha ugu weyn. Oo isna wuu sara kacay oo wuxuu caleemo saaray nolosha aadanaha macne weligiis iyo nabad leh.
Dadka ay dareemaan wasakh, Ciise wuxuu bixiyaa nadiifin.
Wuxuu sharaf ku siiyaa dadka kuwa xishoodka leh.
Wuxuu cafis u fidiyaa dadka dareemaya inay leeyihiin deyn ay ku bixiyaan. Wuxuu siiyaa dib-u-heshiisiin dadka dareema in la go'ay.
Dadka dareemaya inay addoonsadeen, wuxuu siiyaa xorriyad.
Kuwa iyagu dareemaya inaysan ka tirsanayn, wuxuu ku korsanayaa korsasho qoyskiisa joogtada ah.
Kuwa dareemaya daal, waxay siisaa nasasho.
Kuwa welwelsan, wuxuu siiyaa nabad.
Rituals waxay bixiyaan oo keliya baahida loo qabo soo celinta joogtada ah. Jaceylka ayaa kaliya bixiya damac xoog leh oo dheeraad ah. Ma taqaanaa qof u baahan Masiixa? Ma jiraan wax aad ka qaban karto? Tani waa wax laga fikiro.